को बन्छ करोडपतिः कुकीज सम्बन्धी नीतिहरु
एस.आर.बि.एन मिडिया प्रा.लि (“हामि”, “हाम्रो”, या “हामिहरुको”) ले कुकीज https://kbcnepal.com वेवसाइट र KBC Nepal App मोबाइल एप्लिकेसन (समग्रमा हाम्रो “सेवा”) मार्फत हाम्रो सेवा प्रदान गर्दछौँ । हाम्रो सेवा प्रयोग गरेसंगै तपाइँले हाम्रो कुकीज सम्बन्धी नीतिहरुमा सहमति जनाउनुभएको भन्ने बुझिनेछ ।
हाम्रो कुकीज सम्बन्धी नीतिहरुले कुकीज के हो, कुकीज कसरी प्रयोग गर्ने, सेवामा तेस्रो पक्षलाइ कसरी सहकार्यमा ल्याउछौँ र कुकीजहरुमा यहाँको छनोट र अन्य जानकारीहरु समेट्दछ ।
हामीले “cookies” लाइ सुचनाहरु संकलन गर्न प्रयोग गर्दछौँ । कुकी एउटा सानो डेटा फाइल हो जसले तपाइँले कुनै वेवसाइट भिजिट गर्दा दिने जानकारीलाइ आफ्नो प्रयोजनका लागि कम्पनि या साइटले राख्दछ । कुकीजले प्रयोगकर्ताको गतिविधि मापन गर्न र साइटमा तपाइँको प्रयोगमा सहजता प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ । जस्तै उदाहरणका लागि तपाइँको पासवर्ड यहाँले चाहेमा सेभ हुन्छ र पछि सिधै खुल्छ तर त्यो पासवर्ड सर्भरमा जाने हैन ।
कुकीज के हुन ?
कुकीजहरू सानो वेब टुक्रा हुन् जुन तपाइँले वेब ब्राउजरमा भिजिट गर्दा वेबसाइट द्वारा त्यहाँ पठाईएको छ। कुकी फाइल तपाइँको वेब ब्राउजरमा भण्डारण गरिएको हुन्छ र हाम्रो सेवा वा तेस्रो-पक्षलाई तपाईंलाई पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ । तपाइँको अर्को भिजिटलाई समेत सजिलो बनाउन र सेवालाई अझ बढी उपयोगी बनाउन मद्दत गर्दछ ।
कुकीजहरू “निरन्तरतामा” वा “सत्र सत्रमा” हुन सक्छन् । जब तपाइँ अफलाइनमा जानुहुन्छ निरन्तर रहने कुकीहरू तपाईँको व्यक्तिगत कम्प्युटर वा मोबाईलमा रहन्छन, अनी तपाइँको वेब ब्राउजर बन्द हुँदा सत्र कुकीजहरू मेटाइन्छन् ।
एस.आर.बि.एन मिडिया प्रा.लिले कुकीज कसरी प्रयोग गर्छ ?
जब तपाइँ सेवामा पहुँच खोज्नुहुन्छ या प्रयोग गर्नुहुन्छ हामि तपाइँको वेव ब्राउजरमा कैयन कुकीज फाइलहरु राख्न सक्दछौँ ।
निम्न उद्देश्यकालागि हामि कुकीज प्रयोग गर्दछौँः
सेवाका केहि कार्यहरू सुचारु गर्न
विश्लेषणहरु प्रदान गर्न
तपाईँको प्राथमिकताहरू भण्डारण गर्न
व्यवहारिक विज्ञापन सहितका विज्ञापन वितरण तथा सुचारु गर्न
हामि सेवा सञ्चालनका निमित्त निरन्तर(Persistent) र सत्रबद्ध (session) दुवै कुकीजहरु लगायत अन्य कुकीहरु पनि प्रयोग गर्दछौँ ।
अत्यावश्यक कुकीहरुः सेवाको व्यवहारिक र लुकको लागि सुचनाहरु याद गर्न हामि यी कुकीहरु प्रयोग गर्दछौँ । जस्तो की यहाँको साइटका लागि भाषा छनोट ।
खाता सम्बन्धी कुकीहरुः हामि खाता सम्बन्धी कुकीहरु प्रयोगकर्ताहरुको वैधानिकता प्रदान गर्न, अनाधिकृत खाता बन्न नदिन प्रयोग गर्दछौँ ।
विश्लेषणात्मक कुकीहरुः हामि विष्लेषणात्मक कुकीहरु सुचना र जानकारी ट्र्याक गर्न र ततअनुरुप सुधार गर्न प्रयोग गर्दछौँ । विष्लेषणात्मक कुकीहरु हामि नयाँ विज्ञापन, पेजहरु, सेवाहरु या नयाँ कार्यक्रम जाँच गर्न परिवर्तित सेवाको ढाँचामा प्रयोगकर्ताको प्रतिकृया कस्तो आउँछ भनेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ ।
विज्ञापन कुकीहरुः यस प्रकारका कुकीहरू विज्ञापनलाइ सेवामा र सेवाबाट वितरण गर्न र विज्ञापनहरूको प्रदर्शनको ट्रयाक गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ। यी कुकीजहरू तपाइँका गतिविधि वा चासोहरूमा आधारित विज्ञापन प्रदान गर्न या तेस्रो-पक्ष या नेटवर्कहरू सुचारु गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
हामि ती कुकीजहरू प्रयोग गर्दैनौं जसलाइ तपाईँको कम्प्युटरबाट मूल रूपमा कुकीमा पठाइएको हुँदैन । व्यक्तिगत जानकारी को लागी स्वेच्छार्थ रूपमा तपाईँद्वारा प्रदान गरिएको बाहेक (जस्तै, सदस्यता दर्ता वा प्रतियोगितामा सहभागि फाराम), कुकीहरू मार्फत हस्तान्तरण भएको जानकारी कुनै पनि प्रोमोशनल वा मार्केटिङ उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्दैनौं । न त यो सूचना कुनै तेस्रो पक्षसँग श्यर गरिएको हुन्छ ।
तेस्रो पक्षको कुकीज
हाम्रो आफ्नै कुकीज बाहेक पनि, हामि अरु तेस्रो पक्षको कुकीजहरु सेवा या विज्ञापन प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ । यी इन्टरनेट उद्योगका मानक नै हुन र हामि यीनलाइ नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ । यी सबै कुकीजहरु हाम्रो नीतिनियमहरुसंग संबन्ध राख्दछन भन्ने छैन ।
कुकीजमा तपाइँको छनोटहरु के के हुन सक्छन ?
यदी तपाइँ कुकिज डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ या तपाइँको वेव ब्राउजरलाइ कुकीज हटाउन या डिलिट गर्न सुझाउनुहुन्छ भने तपाइँको ब्राउजरको हेल्प पेजमा जानुहोस् ।
कृपया ध्यान दिनुहोस्, यदी तपाइँले कुकीज डिलिट गर्नुभयो या तिनलाइ स्विकार गर्न इन्कार गर्नुभयो भने हामिले प्रदान गर्ने सबै सेवाहरु यहाँले उपयोग गर्न सक्षम नहुन सक्नुहुन्छ वा तपाइँले आफ्नो छनोटहरु भण्डारण गर्न असमर्थ हुन सक्नुहुन्छ । यसकारण हाम्रा केहि पेजहरु राम्ररी नदेखिन सक्छन ।
क्रोम ब्राउजरको प्रयोगकर्ताहरु गुगलमा निम्न पेजमा जानुहोस्ः
इन्टरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजरको प्रयोगकर्ताहरुमाइक्रोसफ्टबाट निम्न पेजमा जानुहोस्ः
फाइरफक्स ब्राउजरको प्रयोगकर्ताहरु मोजिलामा निम्न पेजमा जानुहोस्ः
सफारी ब्राउजरको प्रयोगकर्ताहरु एप्पलबाट निम्न पेजमा जानुहोस्ः
अन्य थप वेव ब्राउजरका लागि कृपया तपाइँ आफ्नो ब्राउजरको आधिकारिक वेव पेजमा जानुहोस् ।
कुकिज बारे थप जानकारी कहाँ पाइन्छ ?
तपाइँले कुकिजबारे थप जानकारी पाउन निम्न तेस्रो पक्षका साइटहरुमा पनि जान सकिन्छः
अल एबाउट कुकिज: http://www.allaboutcookies.org/
नेटवर्क एडभर्टाइजिङ इनिसिएटिभ : http://www.networkadvertising.org/